Hamro Kantipur | स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट दिएर त्यहाँ ओछ्याउने हो र ?: प्रम ओली स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट दिएर त्यहाँ ओछ्याउने हो र ?: प्रम ओली
स्थानीय तहलाई ७० प्रतिशत बजेट दिएर त्यहाँ ओछ्याउने हो र ?: प्रम ओली
काठमाडौं, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तहलाई कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट माग गर्नु उपयुक्त नहुने बताएका छन् । बुधबार नगरपालिका संघको कार्यक्रमलाई सम्बोधन प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रको गच्छेअनुसार स्थानीय तहलाई सहयोग पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी नराख्ने बताएका हुन् । तर, ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहले माग गर्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा भनेको सुन्दा अलिकति मिलेन कि जस्तो लाग्छ । ७० प्रतिशत बजेट दिएर त्यहाँ ओछ्याउने हो र ? त्यत्ति बजेट त्यहाँ पठाएर केन्द्र, प्रदेशले के गर्छन् ?’ केन्द्र सरकारले गरेको बजेट खर्च पनि स्थानीय तहकै विकासमा जाने उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रले स्थानीय तहको अधिकार नखोस्ने पनि बताए । ‘अधिकार कसले किन खोस्छ ? प्रधानमन्त्रीले खल्तीमा हालेर त्यसको ब्याज पाउँछ ? स्थानीय तहका अधिकारहरु खोसेर आफ्नो टेबलमा राख्यो भने फूलदानी हुन्छ ? सजिन्छ त्यो ? केही पनि हुँदैन । हामी सबैले मिलेर आ-आफ्ना ठाउँबाट देशको विकास गर्नुछ । पक्षविपक्ष हामी हैनौं, छैनौं । मेयरको ठाउँमा मेयर हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा म हुन्छु । त्यहाँ पनि अलि अलि मतभेद छ । त्यो मिल्दै जान्छ ।’